Re: INONA KAY NO TENA ANTONY HITERAHANA ?
Date: 29 janvier 2018 - 10:02
Aleho azavaina tsara aloha fa tsy exclusivité ny FM ny politique pro na antinataliste. Na dia atao hoe noho ireo mpiaro ny "ordre mondial" matahotra ny fibosesehany olona avy firenenana mahantra dia tia hametra ny fitombony mponina avy aty @ tany mahantra.
Ny dimension démographique tompoko dia tsy maintsy jereny mpitondra firenena tsirairay.
Ho any firenena mandroso izao, noho ny fahatsarany faripiainana sy ny fahasalamana dia mihalava ny andro iainana (espérance de vie à la naissance). Nefa noho ny fihenany zaza ateraka (latsaky ny 2 @ salan'isa isaky ny vhv), dia miha antitra ny mponina, mety ihena ihany koa ny isany mponina. Mihavitsy ny cotisant @ sécurité sociale, nefa ny charge @ sécurité sociale miha mitombo, satria miha mitombo ny isany retraité. Noho izany ireo firenena ireo dia manao politique pro-nataliste @ izao fotoana izao, mba hitomboany isany cotisant sur le long terme. Fa sur le court et moyen terme dia amporisihina ny fidiran'ireo mpiasa manampaihaizana sy manana fahaiza manao (immigration choisie hoy SARKOZY) mba hitombony cotisation sociale. Tsy misy resaka eo hoe tsy miandany @ firehan-kevitry ny FM ny mpitondra @ tany mandroso.
I Roumanie t@ androny CEAUSESCU koa t@ fotoan'androny dia nampirisika mafy ihany koa ny fiterahana ary navatra mihitsy manaramaso ny vhv rehetra izay manambady @ fiterehany izy ireo indray ohatra raha vao mahazo taona ny zanaka nateraka farany. Fa etsy andaniny i Chine Populaire izay manana régime totalitaire ihany koa toa any Roumanie t@ fotoan'andro dia nametra ny fiterahana (politique de l'enfant unique). Ohatra maromaro ireo maneho fa arakaraky ny vinany mpitondra ihany io.
Ny an'i Shina izao na dia fantatra izao ny vokan'ilay politique de l'enfant (lasa vitsy kokoa ny vhv raha oharina @ lhl), dia notazominy izay politika izay. Nafainganin'ny Shina ihany koa ny fisokafany toekareny hany ka i Shina sy firenena vitsy hafa ihany tao anatiny ireo tena mahantra no nahavita nampihena @ antsasany ny tahany mahantra (taux de pauvreté) teo anelanelan'ny 2000 sy 2015.
Raha ny momba ilay hoe "mitomboa mamenoha ny tany", dia mba jereo ny baiboly dia milaza ihany koa fa tsara raha hafaka tsy manambady, fa raha tsy mahatanty dia aleho manambady toa izay lasa any @ helo, izany hoe misy olona izany natao tsy hiteraka. Ary mbola apôtsôly Paoly ihany koa no manarotra fa adidiny ray ny mikaraka ny zanany fa raha tsy manao izany izy dia meloka : planification de naissance responsable ny fahazoaka an'izany, fa tsy hoe miteraka tsy ankijanona na dia tsy maharaka aza ny entimanana
Par: Mpitady ny marina
Date: 30 janvier 2018 - 16:34
Ny marina <<< Fa ity fiainana ity ve zany dia ho ekena fotsiny tsotra izao e ! hanaiky fotsiny ny lahatry ny zanahary hoe tsy maintsy zao sy izao raha tsy izany tsy mety. Satria izao sy izao no voalazan'ny baiboly sy ny sisa.
Ilay fomba fiainan-tsika olombelona no tena manimba ny tany.
gaga be -> any ivelany izany momba ny antom-pisiana sy ny hiterahana izany fanontaniana normal. Fa isika gasy dia be loatra no endoctriné amin'ilay fivavahana dia manaraka ara-bakiteny izay voasoratra ao nefa ilay firenena tsy maharaka intsony. Vao 25 millions nefa isika, eritrereto izany rehefa afaka zato taona eo mety efa hatratra x2 io isa io.
Ny mponina malagasy dia mitera-bitro fotsiny tsy hay hoe mankaiza sy hanao inona daholo, tsy mahagaga raha lasa be ny vono olona, be no tsy mahita toerana amin'ilay société mantsy dia manaiky izay asa misy na asan-dratsy aza.
@@@ -> mila politika avy amina dictateur ihany zany eto raha ny tianao lazaina amin'ireo hevitrao momba ny politika any ivelany ireo. Ny olona mantsy tsy ho voasakana tsy hiteraka zany, indrindra ny aty amin'ny tany mahantra, malefaka loatra ny politikan’ny mpitondra tsy ahafehy na raovina na raovina an’io resaka démographie io.
Za tena malahelo mahita ny sasany mipitrapitra fotsiny mitazana ny fiainan’ny sasany manaraka ny norme tsara, mipitrapitra sady manontany tena hoe «ary za ?»
Mitady ny marina koa <<<< Hajaina ny safidin’ny tsirairay sisa.
Illusion daholo ny zavatra hita maso izay tsy avy amin’ny natoraly nataon’ny olombelona, ny fianarana, ny institutions politika, ny lalàna, ny technologies …
Tsy matotra >>> resaka andraikitra fotsiny izany dia ampy maha-matotra ? Avy amin’ny conscience naturelle zany, resaka instinct parental, toy ny biby manao izay vitany mba hamelomana ny zanany satria tsy ho zakany ahita an-janany hijaly tsy mahita hoanina dia ataony izay mety mba hampilamina (amiko izay ilay fahamatorana). Avy amin’ny tahotra.
Date: 30 janvier 2018 - 16:36
Illusion daholo ny zavatra hita maso izay tsy avy amin’ny natoraly nataon’ny olombelona, ny fianarana, ny institutions politika, ny lalàna, technologies …
Date: 30 janvier 2018 - 19:04
ianao irery izao no mba nitondra valinteny mazava , mba hikarakara anao rehefa any aoriana izany no hiterahanao, hajaina ny hevitrao, fa ireto milaza fitiavana eh , sitrapon Atra eh, fandaharana eh, sns ireto , resaka filozofia fotsiny, tsy valinteny ireny fa fampieritreretana fotsiny, mandany fotoana ... amiko dia safidy ,na hiteraka, na tsia, misy antony daholo ireo safidy ireo , izay no fanontanina ny namorona sujet , fa tsy ny any andanitra kosa no ampidirina @ izay ataon olona roa miboridana ao ampandriana
Par: Ny olombelona
Date: 30 janvier 2018 - 21:55
Raha ny hevitro manokana dia tsy azo arahina ara-bakiteny izay voalaza rehetra ao anaty baiboly. Toy ny hoe miteraha dia mamenoa ny tany.
Tsy mba manadihady ny mety ho voka-tsoa na voka-dratsy ve fa dia hoe izay ny voalaza ao dia atao????
Maka ohatra mazava tsara aho. Misy miteny ao anaty baiboly hoe raha misy mamelaka ny takolakao havia dia omeo azy koa ny havanana. Ny fanontaniako @ nareo izay milaza fa tokony ho tanterahina antsakany sy andavany izay voalazan´ny baiboly , moa ve efa mba nomenareo ny olona namelaka ny takolakareo havia koa ny takolakareo havanana?
Raha adika tsotra manko io andininy io dia hoe raha nisy nangarona ny poche-nao , nefa mbola misy zavatra tsy azony tao anaty poketranao dia omeo azy koa ny poketra ho angaroniny?
Matetika any ivelany maheno hoe tsy maharaka ny karamako ka tsy hiteraka mihintsy aho, na hoe ataoko iray ihany ny zanako. Fa ny aty @ tany mahantra dia tsy ny toe-bola no anaovana zanaka na tsia fa hoe mifankatia ny olon-droa dia atao aloha izay fanaon´ny mpivady rehetra fa rehefa avy eo hita eo ny tohiny.....Na hoe mba tsy ho tapitra hatreo ny tantarako, na hoe hisy hitaiza ahy rehefa antitra aho, na hoe hisy hilanja ny fatiko rehefa maty aho.
Mampalahelo ilay zaza tsy nifidy ny ho tonga ety an-tany nefa mizaka fahoriana sahady.
Date: 31 janvier 2018 - 08:50
Tsy vao izao, fa efa hatrizay ny fanenjahana atao amin'ny Kristiana. Mety hevitra sy fomba fijery samy manana ny azy ny antony na zavatra hafa
Amin'ny maha-olombelona dia te hitrôtra isika, te hamaly. Saingy tsy any ny lalana @ izay tena miezaka mihaina araky Ny sitrapon'Andriamanitra . Misy mihevitra fa filozofia sns ny fanarahanao izany satria tsy azony.
Fa inona no ataon'olon-droa anaty fandriana tokoa?tsisy idiran'ny fitiavana ve sa filana fotsiny toy ny biby,
Ny fanambadiana no hanohizana ny asam-paharian’Andriamanitra ary olon-dehibe afaka misaina no nomeny tso-drano hiteraka sy hameno ny tany
Date: 31 janvier 2018 - 11:05
Ny marina///Ny fanaovana ny sitrapon’A/tra marina tsy misy kilema no antony hanenjehana ny krisitiana fa tsy arahana be ara-bakinteny hoe miteraha hoy A/tra dia hiteraka. F’angah zany didy folo? Safidy io fa samy hilanja ny vokany. Ady hevitra ny eto inona no antony hiterahana. Ataoko fa tsy hors sujet ny nolazaiko teo ambony satria mikasika ny antony hahatongavana eto an-tany sy ny tanjona @zany ary ny fiarovana sy fitahiana omen’A/tra ho an’izay matoky azy marina eto @ity tany feno fahoriana ity. Efa hatr@ andron’ny testamenta taloha kosa dia efa nisy ny ady ary tsy ho satrin’ny devoly ve ho be ny olona ambonin’ny tany @zay matavy tsara ny helo be hazany.
gaga be, tsygg, Ny marina//// Isika olombelona mbola afaka misaina sy mandanjalanja tsara hoe raha izao no hataoko dia izao no vokany. Ny biby tsy afaka manao izany ary tsy mahalala izay hiafarany fa rehefa taitra ny filany dia miteraka na tsy naniry zanaka aza. Tiany foana ny zanany ny sombin’ny ainy ary karakarainy sy arovany. Dia tahaka izany koa @ ankapabeny ny olombelona, tiana foana izay zanaka tonga eo na nirina na tsia ary voanjanary izany. Saingy tsy any ilay sujet.
Ny ankabeazan’izay te hiteraka eto dia:
- Hitsinjovany ny fahaterany, A/tra efa niteny fa hisahirana izy hikarakara antsika na dia fotsy fotsy volo aza isika, ny zanaka mety tsy hamaly valim-babena ary mety ho faty alohan’ny RAR
- Hilanja azy any am-pasana, razana lasa vovoka ve no omena voninahitra
- Mahita ny hafa miteraka dia te hiteraka, misy fialonana sy fifaninana ary fitsiriritana, fahotana zany.
- Voninahitra eo anatrehan’ny fiaraha-monina fa tsy mahazaka tondro-maso sy fosa raha tsy manana, mangataha dia omena hoy ny Tompo. Betsaka ny momba tao @ baiboly fa nahazo. Omen’A/tra foana izany raha mahasoa anao saingy hoy izy “Katsaho aloha ny fanjakan’A/tra sy ny fahamarinany dia hanampy anao ny zava-drehetra”.
- Mahita zazakely dia te hanana, normal zany zazakely ve tsy hahafinaritra fa mandefa fisainana kely fotsiny hoe hiteraka zao dia hatao ahoana ny fitaizana ny zanaka mba ho olom-banona. Samy maniry zany daloho isika rehetra ary rehefa te hanana fiainana misy fiarovana, fitahiana ary mendrika dia tsy maintsy miezaka manao ny sitrapon’A/tra 100% raha tsy izany dia ny devoly no manjaka. Ny RAR aloha no fitaratry ny zanaka @ fitondra-tena fa manjary lasa mpitari-bato vilam-bava raha mifanohitra @zany. Tompn’andraikitra tanteraka ny RAR eo anatrehan’ny zanaka tsy mahazo mody fanina @ ditra.